ဆောင်းရာသီဇယားSAMULAŞဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားထဲမှာစတင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
08 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, လမ်းမကြီး, Institute, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Samulaş, တူရကီ 0
Samsun SAMULAŞကြောင့်သစ်ကိုပညာသင်နှစ်၏နွေရာသီအသုံးအနှုန်းနှင့် Express ၏အဆုံး, လက်စွပ်ကစတင်ခဲ့သည်ဆောင်းကာလစာသင်ချိန်အတွင်းဘတ်စ်ကား terminal ကိုတနင်္လာနေ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအလေ့အကျင့်၏လျှောက်လွှာတောင်တက်နာရီထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာ
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေ။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc ကို (SAMULAŞ), နွေရာသီကာလ၏အဆုံးနှင့်တနင်္လာနေ့ကနေအမြန်နှင့်လက်စွပ်လိုင်းများ၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကျောင်းကိုဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပြောင်းလဲနေတဲ့တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီ, စက်တင်ဘာလ 09 ဆောင်းရာသီတောင်တက်အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရပ်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းSamulaşကြေညာချက် "ဟုအဆိုပါသစ်ကိုပညာသင်နှစ်နွေရာသီရာသီရဲ့ start သည်နှင့်အညီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအမံများ၏ပြောင်းလဲနေတဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှနေကြ၏။ အထူးသဖြင့်နေဆဲအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီကာလများတွင်ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းဆရာများ, အမြန်ကျွန်တော်တို့ဟာအကျိုးရှိသောဖြစ်သစ်ကိုအစီအမံတစ်ခုအဆင်ပြေလက်လှမ်းရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိသဘောပေါက်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
1 MINUTE: E8 သစ်တွင် TIME LINE ခုနှစ်တွင်!
အလေးပေးအားလုံးနာရီမှာအလုပ်ရှုပ်နေ ", အ 1 မိနစ်ကြားကာလတစ်ကြိမ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအထွတ်အထိပ်နာရီအတွင်း, သူတို့ရဲ့ဇာတိမြေမှတက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး E8 လိုင်းများတွင် Omi ကနေကြေငြာချက်ကိုလည်း Beledieyevleri ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးမကြာခဏထိုကာလကြားကာလနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်း terminal ကိုအဖြစ်နွေရာသီကာလအတွင်းနေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များ၌ပေးသော 24 နာရီ "ဖြစ်လိမ့်မည်။
E3 E5 10 မိနစ်နှင့်ဝေးလံသော
အဆိုပါကြေညာချက်ကိုလည်းအထွတ်အထိပ်နာရီမှာလမ်းကြောင်း E3 အမြန်လိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 10 မိနစ်Ondokuzmayısတက္ကသိုလ် (OMU) -Research Hospital-, မိနစ်4အထွတ်အထိပ်နာရီအတွင်းလမ်းကြောင်း်ထမ်းဆောင် E15 လိုင်းအတွက် Baruthane-Kalkancıနှင့်အတူမဟာဗလီသုတေသနဆေးရုံလက်စွပ်နှင့် terminal ကိုဘတ်စ်ကား, Belediyeevleri ထုတ်ဖော်ပြောဆို လမ်းကြောင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လိုင်းအတွက် E5 Express ကိုဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်သူတို့ 10 မိနစ်ကြားကာလနှင့်အတူပြုမူကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
အသေးစိတ်အစီအစဉ်များတရားဝင် SITE ကို
09 စက်တင်ဘာလ 2019 "နိုင်ငံသားများဖို့SAMULAŞရှင်းပြချက်ရဲ့အဆုံးမှာဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများ၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦးကို web site ကိုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ပါလိမ့်မယ် www.samulas.com.t ဖြစ်ပါသည်'' ကိုလည်းသင်က "မက်ဆေ့ခ်ျကိုကူးစက်ခံခဲ့ရသည်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Bursa လမ်းရထားနွေရာသီအချိန်ဇယားကိုစတင်ခဲ့သည် 27 / 04 / 2012 30 ဧပြီလတနင်္လာနေ့ကနေနွေရာသီအခွန်ဆီကိုပြောင်း, ရထားပေါ်မှာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ပြင်းထန်သောအတိုးမြင်ဘူးသောပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတင်နေဖြင့် Imparted ။ '' လွမ်းဆွတ် '' တစ်ဦးမြို့ပြဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့အဖြစ် line ကိုအချိန်ဇယားအတွက်လိုအပ်သောအချိန်တိုးချဲ့မှုလမ်းရထားပြောင်းလဲနေပါတယ်အသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးပါသောနည်းလမ်းများသို့လှည့်။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီမှစတင်5နွေရာသီအချိန်ဇယားအရသိရသည် 30 တထောင်ကလူတစျနေ့၏ပျမ်းမျှအချိန်အကြိုးခံစားသောလမ်းရထား, ဒါဟာ 07.00 23.00 ၏နာရီအကြားအစေခံပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်; အကြီးအကျယ် 07.00 10.00 ၏နာရီအကြားနိုင်ငံသားများ, Canci နံနက်ကအသုံးပြု - Çınaröအကြား ...
Ido နွေ Tariff နှင့်Avşaလေ့လာရေးခရီးသွား Marmara ကျွန်းနှင့်အတူစတင် 27 / 03 / 2014 Ido နွေAvşaနှင့်အတူ Tariff နှင့်အချိန် Marmara ကျွန်းကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်: ကြောင့်ကြာရှည်နှင့်ခရီးသည်တင်ရက် Ido, "နွေဦး Tariff" ဧကနျမုခပြွအတူတကွခရီးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်, Avsar နှင့်အချိန် Marmara ကျွန်း Ido စတင်တာဖြစ်ပါတယ်, များစွာသောပင်လေ့လာရေးခရီးသွားပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။ အရေအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကအစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းများမှာဖြစ်ပါတယ် Ido, အသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်နံပါတ်များအတွက်တိုးလာသည်အဘယ်မှာရှိအချိန်လိုင်းဖြင့်အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ, ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်၏သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများမှယုတ်လျော့လေ၏။ Ido, အ Marmara ကျွန်းAvşaနှင့်ဧပြီလ 18 ကတည်းကစတင်အချိန်။ Tariff အတွက် Ido 1 နွေ, အကျရှညျရက်ပေါင်းနှင့်မြို့တော်ရဲ့ဧပြီလကနေသမိုင်းနှင့်အတူဇွန်လ 2014 15 2014 သည်ရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည် ...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအချိန်ဇယားကိုစတင်ခဲ့သည် 12 / 12 / 2015 မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားဆောင်းရာသီမှာအချိန်ဇယားထဲမှာစတင်: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ-Eskişehir, တူရကီ-Konya နှင့် Konya-အစ္စတန်ဘူလ် high မြန်နှုန်းရထား (YHT) နာရီအချိန်ကြောင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများ 15 မှဒီဇင်ဘာလ မှစ. သစ်ကိုအခွန်လျှောက်ထားရန်။ TCDD ဖြင့်ကြေညာချက်အရ, YHT အချိန်ဇယားသည်ချဉ်းကပ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများ, ခရီးသည်တင်ဝယ်လိုအားနှင့်အညီပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်နေ့ရက်ကိုအချိန်တိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ-Eskişehir, Konya နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ-Konya YHT YHT အတွက်လမ်းကြောင်း running, သစ်ကိုအကောက်အခွန်အညီဒီဇင်ဘာလကတည်းက 15 အစေခံပါလိမ့်မယ်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့အချိန်, ဆိုက်ရောက်အချိန်, အထူးလျှော့စျေးနှင့်အခကြေးငွေသတင်းအချက်အလက် TCDD နှင့်အကြံပြုချက်များ၏ YHT ရပ်တန့်လိပ်စာကနေရရှိနိုင်ပါ "yolcu.tcdd.gov.t ဖြစ်ပါတယ်" ။
Kocaeli အဏ္ဏဝါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2017 နွေရာသီအချိန်ဇယားကစတင်ခဲ့သည် 13 / 05 / 2017 Kocaeli နွေရာသီအချိန်အကောက်အခွန်အဏ္ဏဝါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2017 စတင်ခဲ့သည်: Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှနွေရာသီအချိန်ဇယားဖို့ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု 2017 မေလ 15 2017 နှစ်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်တနင်္လာနေ့စတင်သည်။ အပိုဆောင်းအချိန်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တစ်နေ့ 8 95 ဆိပ်ခံတံတားနှုန်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းအချိန်နှင့်အတူ Kocaeli မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဖြည့်တွင် TIME ထားလေ့လာမှုကြောင့် fixed အကောက်အခွန်လျှောက်လွှာကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ရာသီ2တလျှောက်လုံးတိုင်းပြည်အနှံ့စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်းမှနွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်နာရီပေါင်းများစွာ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဏ္ဏဝါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွန်နာရီပြောင်းလဲမှုများအောင် by ရုံနွေရာသီရာသီအတွက်လိုအပ်သောလိုင်းများမှနောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်၌ထားလေ၏။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, Karamursel အဖြစ် 15 မေလ 2017 - Degirmendere - ...
YHT ခုနှစ်တွင် '' ဆောင်းရာသီဇယားစတင် 05 / 12 / 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, ဆောင်းတွင်းရာသီတူရကီ-Eskişehir, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ-Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစီအစဉ်များနံပါတ်နှင့်ကြိမ်လုပ် Konya-Konya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစဉ်အတွင်းခရီးသည်များ၏ပြောင်းလဲနေတဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဒီဇင်ဘာလ 10 သတင်းအချက်အလက် 2017 ၏နေ့စွဲကနေတရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ, http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/yüksekမြန်နှုန်းရထား / 1 444 82 33 အင်တာနက်ကနေဒါမှမဟုတ်ခေါ်ဆိုခစင်တာထံမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။ ကို DATE ရက်စွဲ 10 ဒီဇင်ဘာ 17 သင်နာရီကိုနှိပ်ခြင်းအား YHT reapplied ကတည်းကသင် 2017 (ပါဝင်သည်) ကိုနှိပ်ခြင်းအား reapplied YHT နာရီအကြားဒီဇင်ဘာလ 18 reapplied YHT အကြား -27 ဒီဇင်ဘာ 2017 (အပါအဝင်) 27 (ပါဝင်သည်) -2017 သင်နာရီကိုနှိပ်ခြင်း
SAMULAŞဆောင်းရာသီ Term တောင်တက်နာရီ
Ido နွေ Tariff နှင့်Avşaလေ့လာရေးခရီးသွား Marmara ကျွန်းနှင့်အတူစတင်
Kocaeli အဏ္ဏဝါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2017 နွေရာသီအချိန်ဇယားကစတင်ခဲ့သည်
YHT ခုနှစ်တွင် '' ဆောင်းရာသီဇယားစတင်
အဆိုပါ 2018 Kocaeli ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Tariff နွေရာသီတောင်တက်စတင်ခုနှစ်တွင်
နွေဦးရာသီဇယားအစ္စတန်ဘူလ်ပင်လယ်ပြင်ဘတ်စ်ကားများတွင်မေလ 1 အတွက်စတင်
နယူးထောင်မှ Service ကိုစတင်ရန် Express ကိုလမ်းကြောင်းsamulaş
İzmirdeဆောင်းရာသီဇယား, ဘတ်စ်ကားများနှင့် Metro လေ့လာရေးခရီးတိုးမြှင့်